Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Faly izy, faly aho, tena faly isika | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Faly izy, faly aho, tena faly isika
Miely dia miely tato ato etsy sy eroa ny siosion-dresaka fa manan-kevitra handray ny andraikitra mpitarika ny fanoherana andriamatoa Marc Ravalomanana. Arahaba soa arahaba tsara ! Tsy misy hoatran’izany angamba eo amin’ny toe-draharaha ankehitriny ny fanomezana hasina ny Repoblika amin’ny fomba fanajana ny lalàmpanorenana. Nandritran’ny dimy taona lasa efa tsapa ny fandehanana ila toy ny hoe nikitringa ny fizotra’ny rehetra ao anatin’ny rafitra. Nalalaka ny sehatra ho an’izay tia anao kilalao ny fanaovana pôlitika, aiza ve dia sanatria dia toy ny banga tafaray ao anatin’ny alina ka samy manararaotra ny aizina daholo anara-po ihomehy tsy mila manakom-bava. Raharaha-pirenena no resaka, tsy hita ho adinoina fa tsy afaka atao sangisangy, fanotana fady na tsy tazana hoe tsy manody aza ary eo anatrehan’ny tany aman-danitra hany hita dia ny fisin’ny tsy maty manota.
Tonga ity anefa ny fotoana isehon’ny rehetra fandraisana toerana sy adidy arak’izay tokony ho tandrify azy. Mivadika
arak’izany ny pejy, asa izay safidy momban’ny lasa, na hifanekena amin’ny famelana ny lasa ho an’ny lasa sa tsia. Ny ho avy kosa dia tsy misy safidy fa eo ny lalàna izay mifehy ny adidy sy ny fahefan’ny tsirairay eo amin’ny toerana misy azy. Tsy vitan’ ny hoe raharahan’izay mandika fefy, fa andraikitr’izay mpampihatra lalàna izay meloka raha tsy miaro ny lalàna misy mpanitsakitsaka.
Tsy an-kijery tarehin’olona na toeram-boninahitra misy azy ny fihatran’ny lalàna, izany no hany antoka ho an’ny lalàna ahafahany anan-kery ho lalàna. Tsy misy irika anaovana raharaha-pihavanana izany, noho izany tsy ilaina izany hoe fihavanana izany, samy masina eo amin’ny misy azy ny fanajana an’izany toy ny fifanajana efa voafehin’ny lalàna avokoa. Antony ifaliana izany amin’izao fikasan’andriamatoa Marc Ravalomanana andray ny fitarihana ny vondron’ny fanoherana. Misy moa ireo tonga fanahy amin’ny fanontaniana hoe nahoana no izy no ho afaka anolo-tena amin’ny fandraisana an’izany adidy izany. Tsotra ny valiny, raha samy niarahana nanaiky ny fifidianana filoha-pirenena teo, araky ny vokatry ny valiny dia izy no nahazo ny laharana faharoa. Noho izany afaka heverina fa izy no lohalaharana ho solontenan’ny vahoaka tsy nifidy an’andriamatoa Andry Rajoelina izay lasa Filoha ho an’ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka. Tsy Andry Rajoelina noho izany no toherina fa ny politikany ampiharin’ny governemanta. Anjaran’ny filoha kosa no manaja ny fanoherana ny pôlitika tantanany. Manify dia manify ny elanelana amin’ny fanavahana an’izany, fa resaky ny samy manam-panahy, ady aman-kevitra ifanaovan’ny samy manan-tsaina.